သင့် Business မှာ Website တစ်ခု ရှိနှင့်ပေမယ့် Upgrade မြှင့်သင့်ပြီလား
သို့မဟုတ် အသစ် ပြန်လည်ဆွဲသင့်ပြီလား ဆိုတာကို သိသာစေမယ့် အချက်7ချက်ကို ရှင်းပြပေးသွားပါမယ်
1. Modern Browsers တွေနဲ့ အဆင်ပြေမှုမရှိခြင်း
နည်းပညာအသစ်တွေ တနေ့တခြား တိုးတက်လာသလို ရှိပြီးသား နည်းပညာတွေကလည်း နေ့တိုင်း Up to date ဖြစ်နေကြပါတယ်။
ထို့အတူ Website ကိုဖွင့်ကြည့်တဲ့ Browser တွေကလည်း အဆင့်မြင့်လို့လာပါတယ်။
သင့် Website ကို ဖန်တီးခဲ့တဲ့ အချိန်မှာ Developer တွေက ထိုအချိန်က Browsers တွေနဲ့ ကိုက်ညီအောင်ဖန်တီးပေးခဲ့ပေမယ့် အချိန်ကြာလာနဲ့အမျှ Up to date Browser တွေမှာ အဆင်မပြေမှုတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
ထိုသို့ ဖြစ်နေခြင်း ရှိမရှိ စမ်းကြည့်ဖို့က လွယ်ပါတယ်။
လူသုံးများတဲ့ Firefox (or) Chrome ကြိုက်တဲ့ Browser ရဲ့ latest version မှာ သင့် Website ကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ။ အရင် ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ Web design နှင့် ကွဲပြားမှုများရှိနေပါက Developer Team ကို ဆက်သွယ်ပြီး အကူအညီတောင်းသင့်ပါတယ်။
2. Mobile View မှာ အဆင်ပြေမှု မရှိခြင်း
ယခုခေတ်မှာတော့ Website ရဲ့ Responsive (Mobile View) အတော်ကို အရေးကြီးပါတယ်။ Website ကို Laptop, Desktop ကနေ ဝင်ကြည့်တဲ့သူထက် Mobile Phone က ဝင်ကြည့်တဲ့သူက ပိုများနေပါပြီ။ ဒါကြောင့် သင့် Website က Laptop , Desktop တွေမှာသာ အဆင်ပြေပြေမြင်ရပြီး Mobile View မှာ အဆင်မပြေရင်တော့ Web Design ပိုင်းကို Upgrade လုပ်သင့်နေပါပြီ။
3. Web Design က Out of Date ဖြစ်နေ ခြင်း
Web Deisgn ပိုင်းမှာလည်း အရင်ကလို Text တွေအများကြီးနဲ့ မဖန်တီးကြတော့ပါဘူး။ ပြောချင်တဲ့ Concept ကို Text နည်းနည်း Design ကောင်းကောင်းနဲ့ တိုတိုတုတ်တုတ် ပြသနေကြပါပြီ။ Visitor တစ်ယောက်က Website ကိုဝင်တာနဲ့ သူစိတ်ဝင်စားစေမယ့် အချက်တစ်ခုခုနဲ့ မဆွဲဆောင်နိုင်ဘူးဆိုရင် ချက်ချင်းပြန်ထွက်သွားကြမှာပါ။
4. Content Strategy မရှိခြင်း
အရေးကြီးဆုံးထက်ကို ပိုအရေးကြီးနေပါတယ်။ Website တစ်ခုဆွဲထားပေမယ့် Content Strategy မပါတဲ့ Website က ထိရောက်မှုအားနည်းပါလိမ့်မယ်။ အဓိကကတော့ Home Page မှာ သင့် Website ရဲ့ Target တွေကို ထုတ်ပြသင့်ပါတယ်။ သင့် Business က ဘာကြောင့် Webiste ဆွဲရတယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို Content Strategy သုံးပြီး အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Content Strategy ကောင်းကောင်း မရှိရင်လည်း Upgrade လုပ်သင့်ပါတယ်။
5. Website Data တချို့ကို သင်ကိုယ်တိုင် Update မလုပ်နိုင်ခြင်း
Website တစ်ခု Up to date ဖြစ်နေတာကလည်း Visitor တွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ အာရုံစိုက်မိစေပါတယ်။ Blog တွေ အသစ်အသစ် ဖြစ်နေခြင်း၊ Content တွေက ခေတ်နဲ့အညီ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ဖို့ အတွက်ကတော့ Website Owner ကိုယ်တိုင် ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီး Data ကို Update တင်ပေးရပါတယ်။ ထိုသို့ Owner ကိုယ်တိုင် Update တင်လို့မရနိုင်တဲ့ Website မျိုးဆိုရင်တော့ သင့်Website ကို အသစ်ပြင်ရေးသင့်နေပါပြီ။
6. သင့်ပြိုင်ဖက်ရဲ့ Website ကပိုကောင်းတယ်လို့ ထင်ခြင်း
ဒီအချက်မှာတော့ ကျနော်တို့ ရိုးရိုးသားသား ဆုံးဖြတ်ရပါမယ်။ Website ဆိုတာ Company တစ်ခုရဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ပြိုင်ဖက် Company ရဲ့ Website က သင့် Website ထက် ပိုကောင်းနေတယ်လို့ ထင်ရင်တော့ သင့် Website ကို ထပ်ပြီး Upgrade လုပ်သင့်ပါတယ်။
7. Website ရဲ့ Speed အလွန် နှေးနေခြင်း
Internet speed တွေ အလွန်မြန်ဆန်တဲ့ ခေတ်မှာ အလွန်နှေးတဲ့ Website တွေကို Visitor တွေက အချိန်ကုန်ခံပြီး စောင့်မနေတော့ပါဘူး။
ဒါကြောင့် သင့် Website ရဲ့ Page Speed မြန်နေဖို့က အရေးကြီးနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆုံးထိဖတ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင့်အတွက် အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင် ပြန်ပြီးမျှဝေပေးဖို့လည်း တောင်းဆိုချင်ပါတယ်
Magnify တစ်ခု ပြုလုပ်ခြင်း(5)
Previous: လဲရာမှ … ပြန်ထ ဘဝအသစ် စခဲ့သူတို့၏ အဘိဓမ္မာ(3)
Next: သောမတ် အက်ဒီဇင်